ရော်ဘင်ဟုဒ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရော်ဘင်ဟုဒ် နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု လူသိများသော နော်တင်ဟမ်မြို့ရှိ ရော်ဘင်ဟုဒ် ရုပ်တု
ရော်ဘင်ဟုဒ် (အင်္ဂလိပ်: Robin Hood) သည် အင်္ဂလိပ် ရိုးရာဇာတ်လမ်းများထဲမှ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသည့် သူရဲကောင်း တောပုန်း (ဝရမ်းပြေး) တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဒဏ္ဍာရီများက ရော်ဘင်ဟုဒ်သည် လေးမြားနှင့် ဓားသိုင်းအတတ်ကို အလွန်ကျွမ်းကျွင်ပိုင်နိုင်လှကြောင်း ဆိုထားသည်။ သူသည် လင်ကွန်းစိမ်းရောင်ရှိ အဝတ်များကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး၊ သူသည် သူ၏ ပျော်ရွှင်မြူးတူးအဖွဲ့သားများနှင့်အတူ ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် သူဌေးသူကြွယ်များဆီမှ မကြာခဏ လုယက်ပြီး ဆင်းရဲသားများအား ပြန်လည်ပေးဝေလေ့ရှိကြောင်း  ဟု အစဉ်အလာအားဖြင့် လူအများက ယုံကြည်လက်ခံထားကြသည်။ ရော်ဘင်ဟုဒ်သည် အလယ်ခေတ်နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် ရိုးရာပုံပြင်များထဲမှ လူစွမ်းကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီး၊ သူ့အကြောင်းသည် ခေတ်အဆက်အဆက်တွင် စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်မြင်သံကြား စသောကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားလျက် ပါဝင်လာသည်။ ရော်ဘင်ဟုဒ်သည် ယခုခေတ်တိုင်အောင် လူအများ ပြောစမှတ်ပြုပြီး လေးစားချစ်ခင်ခြင်းကို ခံနေရသော သူရဲကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်လေသည်။
↑ The Child Ballads 117 "A Gest of Robyn Hode" (c. 1450) "Whan they were clothed in Lincoln Green".
↑ Stephen Thomas Knight 2003 Robin Hood: A Mythic Biography p43 quoting John Stow, 1592,Annales of England "poor men's goodes hee spared, aboundantly releeving them with that, which by thefte he gote from Abbeyes and the houses of riche Carles".
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရော်ဘင်ဟုဒ်&oldid=480077" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။